Ungayitshintsha njani ngokukhawuleza ingxowa yothuli yomqokeleli wothuli?
ngomphathi ku 20-02-23
Ngokubanzi, ibhegi yothuli yokususa uthuli inxitywa ngokuthe ngcembe, kwaye esona sizathu sokudinwa kwengxowa yothuli ngamandla okusila othuli. Ukongeza, kukho izizathu zokuwohloka kwezinto zokucoca ulwelo kunye nokubola kwezinto zamachiza ezibangelwa kukuphakama ...
Ngaba uyazi ukuba yintoni fan yokulwa umhlwa?
ngomphathi ku 20-01-30
Yintoni fan anticorrosive? I-fan ye-Anticorrosive luhlobo lwe fan ekhethekileyo, efanayo nefeni yokuqhushumba, esetyenziswa ikakhulu kwiziganeko ezizodwa. Izinto eziphambili ze-fan-anti-corrosion fan zenziwe ngonyango lokulwa ne-corrosion okanye izinto zokulwa nokubola kwaye zinokumelana nokubola. ...
Yenziwe kwibhokisi yokukhangela ikhabhoni izixhobo zokhuselo lokusingqongileyo-uLuran ukhuselo lokusingqongileyo
ngomphathi ku 19-11-28
Inkcazo yezixhobo zonyango lwegesi yenkunkuma yebhokisi ye-adsorption eyenziwe yasebenza eluhlaza Ibhokisi eluhlaza eyenziwe yasebenza ngekhabhoni eyenziweyo ibhokisi yencindi yomatshini, yinto yokuhluza inkunkuma ye-organic inkunkuma ye-adsorption yeemveliso zezixhobo zokusingqongileyo, ibhokisi yebhokisi ye-carbon eyenziweyo ...
Yenziwe kwibhokisi ye-adsorption yebhokisi yezixhobo zokhuselo lokusingqongileyo
Izixhobo zokutsha ezikhutshiweyo eziveliswe yiHangzhou lvran izixhobo zokhuselo lokusingqongileyo ikakhulu inezixhobo zoxinzelelo zecarbon adsorption, izixhobo zokutsha kunye nesixhobo solawulo sombane. Isixhobo sokutsha senzelwe ukuba senziwe ...
ngomphathi ku 19-09-20
Ukuhamba kokuphambuka kwe-anti-corrosion fan kuya kubangela ukuphambuka kwerhasi ehanjisiweyo, eya kuthi ichaphazele ngokukuko ukusebenza kwe fan. Siyintoni isizathu kwaye ungayisombulula njani? Izizathu kunye nezisombululo zokuphambuka kwinqanaba lokuhamba kwenqanaba lokulwa nomhlwa: 1. Izizathu zokutenxa kokuhamba ...
Ixesha elingakanani ibhegi yothuli kufuneka itshintshwe emva kokusetyenziswa
ngomphathi ku 19-08-09
Ingxowa yothuli yintliziyo yecebo lokucoca ibhegi, isihluzi sebhegi yeyona nto iphambili kwinkqubo yokusebenza, ukusetyenziswa kwengxowa yothuli ukuba kufuneka ixesha elingakanani ukubuyisela inkxalabo yeshishini, kuba ukuphindaphinda kwengxowa yothuli ukubuyisela endaweni indleko zokusebenza, ngezantsi, kodwa uhlalutyo oluhlaza lokusingqongileyo phantsi kwemisebenzi eyahlukeneyo ...
Ukugcinwa rhoqo kunye nolwazi lolondolozo lwebhegi yokuhluza
ngomphathi ku 19-07-28
Isihluzi sebhegi yengubo ngumqokeleli othuli owomileyo, ofanelekileyo ekuqokeleleni uthuli olomileyo nolomileyo olomileyo. Icebo lokucoca ulwelo lisetyenzisiwe ilaphu lokucoca ilaphu okanye ilaphu elingenayo eyolukiweyo, kusetyenziswa ifilitha yelaphu lokucoca ulwelo, igesi xa irhasi enothuli ibamba ingxowa yothuli, amasuntswana amakhulu, uthuli olukhulu, ngenxa ...
Uxinzelelo oluphezulu lweCentrifugal Fan, Ifeni yecandelo leCentrifugal, Inlet engatshatanga yeCentrifugal Fan, Ukukhupha iFan, Umjelo weRadial Blade Centrifugal Fan, Fume Isitshisi,